တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက အစိုးရအနေဖြင့် မြေတန်ဖိုးကို သုညရာခိုင်နှုန်းအထိ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ပြောကြားနေစဉ်။
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂- တန် ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက မြေတန်ဖိုးကိုအစိုးရ အနေဖြင့် သုညရာခိုင်နှုန်းအထိချ ပေးနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း က ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က ရန် ကုန်မြို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌ ကျင်းပသည့် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မ တီနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်များ၏ (၂၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန် ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက”ရန်ကုန် မြို့တော်ကြီးဟာ နှစ်စဉ်နေထိုင်စရာ တစ်သိန်းလောက် လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရောက်လာတာ နဲ့အမျှ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ တော်တော်များများ ဝင်ရောက် လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ရာတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ အိမ်ရာရဲ့ တည်ဆောက်စရိတ် သက်သာဖို့အတွက် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်း ရှင်တွေ၊ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍတွေကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရက တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွေ ဆောက်မယ်ဆိုရင် မြေတန်ဖိုးကို သုညအထိ ချပေးလို့ရနေပါပြီ”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ရာဆောက် လုပ်ရေးကဏ္ဍနယ်ပယ်တွင် ဆောက် လုပ်ရေးစရိတ်သည် အင်မတန် မြင့်မားနေပြီး သံအပါအဝင် အိမ် ဆောက်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပမာဏ ပိုမိုဈေးနှုန်းသက်သာအောင် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းကို တိုးမြှင့်နိုင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက”ပြည်တွင်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို တိုးမြှင့်နိုင်မှသာလျှင် အိမ်ရာတည်ဆောက် ရေး ကဏ္ဍနယ်ပယ်မှာ အိမ်ရာရဲ့ တန်ဖိုးတွေဟာ နိမ့်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ဆောက်တဲ့တန်ဖိုးကို နေစရာမရှိတဲ့သူတွေက ဝယ်ယူနေ ထိုင်ဖို့ဆိုရင် အိမ်ဆောက်တန်ဖိုး သက်သာဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာလျှင် နေရေးထိုင်ရေး အခက် အခဲရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ တို့သည် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ ကို ရွှေပေါက်ကံ၊ ရွှေလင်ပန်း၊ က နောင်၊ ယုဇနစသည့်နေရာများတွင် တည်ဆောက်ရောင်းချလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
လူထုဗဟိုပြု CDD စီမံကိန်းဖြင့် ကသာခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်နှစ်မြို့နယ် အတွင်း ကျေးလက်လမ်းမ?
ပေါင်မြို့နယ် တောင်ပြိုမှု သေဆုံးသူ ၄၀ အထိ တွေ့ရှိ